”Waxaannu diyaar u nahay in aan gacan ka gaysanno guusha shirka” – MW Somaliland oo rejo muujiyey (Daawo) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka ”Waxaannu diyaar u nahay in aan gacan ka gaysanno guusha shirka” –...
”Waxaannu diyaar u nahay in aan gacan ka gaysanno guusha shirka” – MW Somaliland oo rejo muujiyey (Daawo)
(Jabuuti) 15 Juun 2020 – Madaxwaynaha Somaliland, Md Muuse Biixi Cabdi, oo ka hadlay kulankii maanta ee ay Soomaalidu isugu miirrayd ayaa madasha ka jeediyey war debecsan oo rejo muujinaya isagoo yiri ”waxaa nalaka doonayaa dhibaatadii jirtey wax xal u noqon kara.”
MW Muuse Biixi ayaa tibaaxay inay aad ugu dedaalayaan in aanu fashilmin kulanka Jabuuti oo iminka u gudbey marxaladda 2-aad oo ay ku wada hadlayaan laba guddi oo kala metelaya DF Somalia iyo Maamulka Somaliland.
”Waxaannu u nimi inaannu dhegeysanno ra’yiga keenna ka fog oo aannu dulqaadkiisa yeelanno, idinkana sidoo kale ayaannu idinka doonaynaa. Waxaan dhiibney tilmaanteenna annagoo leh war halla heshiiyo, war hallays af garto,” ayuu yiri MW Muuse Biixi.
”Waxay haatan ku hadhay Guddiga Farsamo oo laga sugayo inay keenaan farsamo ku dhisan ”war maxaa inoo dan ah”. Khasab ma aha in maanta wax kasta la isku afgartaa. Halkee ugu dhow ama ugu fudud ee lagu heshiin karaa. Xalay oo idil maynaan seexan. Maxaannu dulqaadannaa, maxaannu ku tarraa inuu shirkani guulaysto. Aad iyo aad baannu u shirray, maxaa dhow maxaase adag. Umad baa na wada eegaysa, halkanna (Jabuuti) waa meel iska barakaysanoo marar baa guulo lagu gaaraa.” ayuu raaciyey Md Biixi.
Dhanka kale, waxaa la saaray Guddiga Farsamada ee labada dhinac oo u badan Wasiirro ka kala socda laba dhinac, kuwaasoo sii dhiraandhirin doona qaybaha dhiman ee shirka oo u muuqda mid ka duwan kuwii hore. Hoos ka akhri magacyada.
Previous articleShucladii Istaadiyo Muqdisho oo 30 sanadood kaddib la shidey + Sawirro
Next articleMaxay Somaliland MIDNIMO ku falaysaa? (Falanqayn dhinacyo badan taabanaysa)